सरकार र सिके राउतबीच भएको सहमति कुनैपनि हालतमा मान्य नहुने भिम रावल ,, – Ranga Darpan
फागुन २५ , काठमान्डौ – सरकार र सिकेरावत बीच भयको ११ बुँदे सहमतिले नेकपा भित्र हलचल र असुन्तस्ट पैदा गरेको छ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का स्थायी समिति सदस्य एवम् पूर्व गृहमन्त्री भीम बहादुर रावलले सरकार र सिके राउतबीच भएको सहमति कुनैपनि हालतमा मान्य नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।
भिमरावल भन्छन यो सहमतिले कतै देश टुक्र्याउने कुरालाई वैधता त प्रदान गर्दैन् ? रावलले आज शनिबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।
सरकारले सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर देशलाई विकासको बाटोमा लानुपर्नेमा कसैको आपति होइन तर रावतसंगको हस्ताक्षरले सबैको मनमा संकापैदा गरेको छ। रावलले सरकारले कसैसँग सम्झौता वा सहमति गर्दा त्यससम्बन्धी उद्येश्य, गन्तव्य र एउटा स्पष्ट धारणा हुनुपर्नेमा सिके राउतसँग सम्झौता गर्दा उद्देश्य स्पष्ट नदेखिएको आरोप लगाए ।
उनले भने,‘राउतजीले म अब नेपालको संविधानअनुसार शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिष्पर्धामा आएँ भनेर हिजो बोलेको भए म आज यहाँ स्वागत गर्थैं । तर, उहाँले आफ्नो सम्बोधनमा त्यस्तो बोल्नुभएन ।
उहाँले यसअघि राष्ट्र विरुद्धमा र देश टुक्र्याउने क्रियाकलाप र अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, ती सबै गलत हुन र म फिर्ता लिन्छु भनेर एक शब्द पनि बोल्नुभएन ।आफू कम्युनिष्ट पार्टीको सच्चा कार्यकर्ता भएकोले पार्टीको विधानको प्रतिरक्षा गरेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।
उनले भने,‘मधेश टुक्र्याउँछु भन्नेहरुसँग जनमतसंग्रह गर्न सहमत हुने हो ? यो कुरा संविधानले अनुमति दिन्छ त ? नेकपाको घोषणापत्रले अनुमति दिन्छ त ? म प्रश्न गर्न चाहन्छु।रावलले कसको स्वार्थमा यत्रो सहमति गरियो ? भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे ।
उनले भने,‘सरकारले यसको जवाफ दिनुपर्छ । सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा स्व–शासनको कुरा उल्लेख गरिएको छ, जुन कुरा हामीले संविधान बनाउँदासमेत मानेका थिएनौं । अहिले फेरि यो कुराले प्रवेश किन पायो ? कतिपय कुराको तत्काल रिजल्ट आउदैन १० / २० वर्ष लाग्छ।
सरकारले यत्रो सहमति गर्दा समेत पार्टी भित्र छलफल नभयको आक्रोश पोखे प्रधानमन्त्री ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई सिके रावत संग तुलना गरेको सुन्दा बडो दुख लागेको बताए देशद्रोह भनेर जेल हालेका रावतलाई प्रचण्ड संग दार्शनिक भनेर बोल्दा म आशार्य छु यसको जवाफ प्रचण्डले दिनुहुन्छ ।रावल भने,
साथै सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को राजीनामा बारे पार्टीको बैठकमा छलफल हुने समेत भिम रावलले प्रस्ट पारे। एक,दुई जनालाई जे मन लाग्यो, त्यही गर्ने भए किन पार्टी चाहियो ?’
सहमति गर्नुअघि किन यो कुरा बाहिर पारदर्शी रुपमा नआएको भन्दै रावलले प्रश्न गरे? राउतले हिजोको सहमति कार्यक्रममा बडो कलात्मक रुपमा आफ्नो सम्बोधन गरेको पनि सुनाए ।
उनले थपे,‘उहाँले कतैपनि राष्ट्र विखण्डनको कुरा फिर्ता लिनुभएको छैन । अहिलेपनि उहाँले बोलेका विखण्डनका कुराहरु छ्याप्तछ्याप्ती पाइन्छन् । बरु, उहाँले विगतमा मैले बोलेका कुराहरु ठीक थियो भनेर पुष्टि गर्न खोज्नुभयो ।सिकेरावत संगको सहमति भनेको रास्ट्रघात समेत भयको रावलले जिकिर गरे ।
क्याप्टेन बाट उपासाना को राम्रो करीएर बन्नसक्छ ,